Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Bheerizebhuri -> Ngirozi nemadhimoni
Ngirozi nemadhimoni: [Bheerizebhuri]
VaFarisei pavakazvinzwa vakati, “Munhu uyu anodzinga mweya yakaipa nesimba raBherizebhuru chete jinda remweya yakaipa.”
Uyezve nyanzvi dzoMutemo dzakabva Jerusaremu dzaiti, “Akagarwa naBheerizebhuri, uye kuti anodzinga mweya yakaipa nesimba rejinda remweya yakaipa.”
Zvinenge zvatoita zvazvo, kana mudzidzi akava somudzidzisi wake, kana kuti murandawo akaita satenzi wake. Kana vakatumidza saimba kuti Bheerizabhuri ko vanganyomba zvakadii avo vemhuri yake?
“Kana ndichidzinga mweya yakaipa nesimba raBherizebhuru, ko vanhu venyu vanoidzinga nesimba raani? Ivo ndivo vachakukonesai.
 Asi vamwe vavo vakati anodzinga mweya yakaipa naBherizebhuru jinda romweya yakaipa. Vamwewo vachida kumuedza vaitsvaka kwaari chiratidzo chinobva kudenga. Asi iye pamusana pokuziva zvaiva mupfungwa dzavo akati kwavari, “Umambo hupi nohupi hunenge huchizvirwisa hunoparara. Imba inenge ichizvirwisa inoputsika. Zvino kana Satani achizvirwisa, umambo hwake hunopamira sei. Nokuti imi murikuti ndinodzinga mweya yakaipa naBherizebhuru. Kana ndichidzinga mweya yakaipa naBherizebhuru ko, vanhu venyu vanoidzinga nesimba raani. Ivo ndivo vachakukonesai.
2 Madzimambo 1:1-3
 Mushure morufu rwaAhabhu, Moabhu yakapandukira Isiraeri. Zvino Ahaziya akadonha pamba yake yepamusoro muSamaria napaiva namapango akarukaniswa akaitwa zvokupiyaniswa akabva arwara, nezvo akatuma nhume akadziti, “Endai mundibvunzirewo kuna Bhaarizebhubhu mwari weEkironi ndizive kuti ndichapora here paurwere uhu.” Asi mutumwa waTenzi akati kuna Eriya wokuTishibhi, “Simuka ukwidze kundosangana nenhume dzamambo weSamaria uti kwavari, ‘Zvareva kuti muIsiraeri hamusisina Mwari here zvomoenda kundobvunzira kuna Bhaarizebhubhu mwari weEkironi?’
Zvino kana Satani achizvirwisa, umambo hwake hunopamira sei. Nokuti imi murikuti ndinodzinga mweya yakaipa naBherizebhuru.
 Jesu akaenda kumba; gurumwandira ravanhu ndokubva ramuunganirazve, zvokuti vakatadza kana kudya chaiko. Zvino hama dzake padzakazvinzwa, dzakauya kuzomutora nokuti zvainzi, “Wava kupenga.” Uyezve nyanzvi dzoMutemo dzakabva Jerusaremu dzaiti, “Akagarwa naBheerizebhuri, uye kuti anodzinga mweya yakaipa nesimba rejinda remweya yakaipa.” Ipapo Jesu akadaidza vanhu ndokutaura kwavari nemienzaniso, achiti, “Nhaimi, Satani angadzinge Satani seiko? Kana umambo hwavakuzvirwisa, umambo ihwohwo haungagoni kumira. Kana vemba imwechete vorwisana pachavo, imba iyoyo haigoni kumira. Zvino kana iye Satani ava kuzvirwisa, haangagoni kumira, asi kuti avakutoenda kumagumo ake. Hakuna munhu angapinde mumba merume rine simba kuti aripambe zvinhu zvaro kusatoti atanga arisunga ndokuzopamba zvemba yaro. “Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvitadzo zvose nokushonha Mwari kwose kunoregererwa vanhu. Asi ani naani anoshonha Mweya Mutsvene haachazomboregererwa chitadzo chake; achava nemhosva yechitadzo chinoramba chiripo narini wose.” Akadaro nokuti vakati, “Ane mweya wakaipa.”
2 Madzimambo 1:16
akati kuna mambo, “Zvanzi naTenzi, ‘Wakatumaka iwe nhume kundobvunzira kuna Bhaarizebhubhu mwari weEkironi, zvinoreva here kuti muIsiraeri muno hamusisina Mwari wokunzwa kuti anoti kudii nazvo? Naizvozvo hausi kuzoburuka pamubhedha pacho pawava, uchatopafa chete.’ ”
Pakutanga Mwari akasika denga napasi.
Asi vaFarisei vakati, “Anodzinga mweya yakaipa nesimba rejinda roMweya yakaipa.”
chechishanu chiri cheonikisi chechitanhatu chiri chekaneriani chechinomwe chiri chekirisoriti chechisere chiri cheberi chechipfumbamwe chiri chetopazi chegumi chiri chekirisopurasi chegumi nechimwe chiri chejasindi chegumi nechipiri chiri cheemetisiti.
Zvino kuzoti shamwari nhatu dzaJobhu padzakanzwa nhamo dzose dzakanga dzawira Jobhu, dzakauya kwaari, imwe neimwe ichibva kunzvimbo yayo. Kwaiti Erifazi muTemani naBhiridhadhi muShuhi naZofa muNaamati. Vakanga vatenderana kuuya pamwechete kuzobata maoko Jobhu vachimunyaradza.
2 Madzimambo 1:6
Ivo vakati kwaari, “Kwauya mumwe murume asangana nesu akatiti, ‘Dzokerai kuna mambo akutumai mumuti,’ zvanzi naTenzi, ‘Zvareva kuti muIsiraeri hamusisina Mwari here zvomoenda kundobvunzira kuna Bhaarizebhubhu mwari weEkironi? Naizvozvo hausi kuzoburuka pamubhedha pacho pawava, unotofa chete.’ ”
Pakutanga Izwi akanga atovapo; Izwi iyeyo akanga ari pamwechete naMwari; Izwi akangawo ari Mwari.
Kana ndichidzinga mweya yakaipa naBherizebhuru ko, vanhu venyu vanoidzinga nesimba raani. Ivo ndivo vachakukonesai.
Aroni akaroora Erishebha, hanzvadzi yaNahishoni mwana waAminadhabhu. Ndiye akamuberekera Nadhabhu naAbhihu naEreazari naItamaru.
Mugore regumi nerechishanu roumambo hwaSiza Tibheriasi, Pontio Pirato ari mutongi weJudhea, Herodhi ari mutongi weGarirea, munun'una wake Firipi ari mutongi wedunhu reIturea neTirakonitisi naRisaniasi ari mutongi weAbhirini,
Akatanga kutonga Bhabheri neEreki neAkadhi munyika yeShinari.
Panguva yaAmuraferi mambo weShinari, Arioku mambo weErasari naKedhoriraomeri mambo weEramu naTidhari mambo weGoimu,
nenondo nemhara nemhembwe nembudzi dzomusango nemharapara nengururu.
Murume uyu ainzi Erimereki, mukadzi wake achinzi Naomi, vana vake vachinzi Mahironi naKirioni. Vaiva vemhuri yekwaEfurati, vokuBheterehemu rokwaJudha. Vakaenda kune rimwe dunhu reMoabhu vakamboita musha ikoko.
Zvino idzi ndidzo nyaya dzaNehemiya mwanakomana waHakariya. Zvino zvakaitika kuti mumwedzi waKisirevhu mugore rechimakumi maviri ndiri muguta guru reSusa,
Mumazuva aAhasuerusi, Ahasuerusi uya aitonga nyika dzinobvira kuIndia kusvikira kuItiopia achitonga zana renyika rine nyika makumi maviri nenomwe,
1 Madzimambo 1:2
Nokudaro makurukota ake akati kwaari, “Mambo changamire, dai patsvakwa musikana, mhandara, ive yokushandira mambo nokumuchengeta, avate pedyo nechifuva chenyu kuti munzwe kudziya, mambo changamire.”
Mweya iyoyo ichaunganidza madzimambo aya kunzvimbo inonzi Amagedhoni muchiHebheru.
Mhuka dzesango dzichasangana namapere, madzimudzangara achidaidzirana namamwe awo madzangaradzimu. Ehe, imomo ndomuchapindwa nomweya werima uchizviwanira pokuzororera.
Jesu akati kwaari, “Ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.
 Zvino Jesu akapindazve musinagogu; imomo maiva nomunhu aiva noruoko rwakakokonyara. Vaivamo vakamutarisisa vachida kuona kuti achamuporesa here nomusi weSabata kuti vamupe mhosva. Ipapo Jesu akati kumunhu woruoko rwakakokonyara, “Simuka, umire apa,” ndokuvati, “Ko, zvinobvumirwa here nomusi weSabata kuita zvakanaka kana kuita zvakaipa; kuponesa munhu kana kuuraya?” Ivo vakati zi — i kunyarara. Zvino iye akaringa — ringa achivatarisa nehasha, achisiririswa nokuomarara mwoyo kwavo, ndokuti kumunhu uya, “Tambanudza ruoko rwako.” Iye ndokutambanudza, ruoko rwake rukabva rwatwasanuka. VaFarisei vakabudamo kundomurangana pakarepo neveboka rokwaHerodhi kuti vangamuuraye sei.
 Vakazosvika kuJeriko. Kuzoti ava kubuda muJeriko navadzidzi vake negurumwandira ravanhu, Bhatimeusi mwana waTimeo, mupemhi aiva bofu akanga agere parutivi pomugwagwa. Paakanzwa kuti ndiJesu weNazareti, akatanga kudaidzira achiti, “Jesu Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwireiwo tsitsi.” Vazhinji vakamutsiura vachiti anyarare, asi iye ndipo paakatonyanya kudaidzira achiti, “Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwireiwo tsitsi.” Jesu akamira akati, “Mudaidzei.” Vakadaidza bofu riya vachiti kwaari, “Tsunga mwoyo; simuka; ari kukudaidza.” Akakanda jasi rake pasi, ndokukwakuka ouya kuna Jesu. Jesu ndokuti kwaari, “Chii chaunoda kuti ndikuitire?” Bofu rakati kwaari, “Mudzidzisi itai kuti ndione.” Jesu akati kwaari, “Chienda zvako, chitendero chako chakuponesa.” Pakarepo akabva avakuona, akatevera Jesu munzira.
Mukuru wavayuniki, akavapa mamwe mazita. Akapa Dhanieri zita rokuti Bheriteshaza, Hananiya akamutumidza rokuti Shadhiraki. Akapawo Mishaeri zita rokuti Meshaki ndokutumidza Azariya zita rokuti Abhedhinego.
Dhebhora akatuma shoko rokuti Bharaki mwanakomana wavaAbhinoamu auye kwaari kubva kuKedheshi kwaNafutari akati kwaari, “Tenzi, Mwari wavaIsiraeri ari kukutuma, ari kuti, ‘Enda utore zviuru gumi zvavarume vedzinza rokwaNafutari neraZebhuruni uvatungamirire kugomo reTabhori.
2 Madzimambo 19:37
Zvino akati achinamata ari mumba maNisiroki mwari wake, vanakomana vake Adhiramereki naSharezeru vakamuuraya nemapakatwa vakatizira kunyika yeArarati. Mwanakomana wake Esarihadhoni ndiye akazotonga panzvimbo pake.
Mukuru wacho ainzi Ohora munun'una wake achinziwo Ohoribha. Vakava vangu vakabereka vana vakomana navasikana. Pamazita avo apa Nyadumba iSamaria, Mudumba iJerusaremu.
Aya ndiwo mazwi aJeremiya mwanakomana waHirikiya mumwe wavapristi vaiva muguta reAnatoti munyika yokwaBhenjamini.
Shemu akabereka vanakomana vake vanoti: Eramu naAshuri naAripakishadhi naRudhi naAramu.
Panguva yaAtakizesesi, Bhishiramu naMitiredhati naTabhieri navamwe vavo vose vechikwata chavo vakanyorera Atakizesesi mambo wePezhiya tsamba yakanyorwa nomutauro wechiArameiki ikaturikirwa.
kwoti Tomasi naMateu, muteresi, kwozoti Jemusi mwanakomana waArifeosi naTadheo.
Panoti vaPatia navaMidhia koti vaEramu navagari vokuMesopatamia nokuJudhea novokuKapadhosia kozoti vokuPondusi neAsia
Musadye nembirawo kunyange zvayo ichizeya haina tsimba rakapararana, yakan'ora kwamuri,
Mashoko omuparidzi, mwanakomana waDhavhidhi, mambo womuJerusaremu.
Tenzi akataurira Mosesi achiti, “Tora mwero wakaenzana-enzana wetunonhuhwira tunoti: sitakite neonika negaribhanumu, tunofanira kuva tunonhuhwirira tune furanginisenzi chaiyo yakanakisisa.
Ndiye akasika nyenyedzi idzi dzinoti, hweva, nechinyamutatu, nechinyamutanhatu nenyenyedzi dzokuMaodzanyemba.
Zvavakataura zvakafadza gungano rose. Vakasarudza Sitefani murume akanga azere nechitendero naMweya Mutsvene kouya Firipi naPurokorusi naNikanori koti Timoti naPemenasi naNikorausi wokuAndiyoku akapindukira kuchiJudha.
richiti, “Nyora mubhuku zvauchaona uzvitumire kumasangano manomwe aya anoti, reEfesusi nereSimuna nerePerigamumu nereTiatira nereSadhisi nereFiradefia nereRaodhekia.”
1 Madzimambo 8:13
Iniwo ndakanyatsokuvakirai imba, ino chaiyo, inomukurumbira, musha wokuti imi mugare zvenyu nokusingaperi.”
Ipapo Jesu akadaidza vanhu ndokutaura kwavari nemienzaniso, achiti, “Nhaimi, Satani angadzinge Satani seiko?
Kana imi musingadi kunamata Tenzi chisarudzai nhasi uno wamunoda kunamata pana vamwari vainamatwa namadzibaba enyu kumhiri kwerwizi kana vamwari vavaAmori vomunyika ino yamugere. Asi ini nemhuri yangu tichanamata Tenzi.”